Ilay mpamono kalalao mahery indrindra teo amin'ny tantara!16 karazana fanafody kalalao, 9 karazana analyse ingrédients, tsy maintsy angonina!
Tonga ny fahavaratra, ary rehefa mihanaka ny kalalao, dia afaka manidina mihitsy aza ny kalalao any amin'ny toerana sasany, izay vao mainka mahafaty.Ary miaraka amin'ny fiovan'ny fotoana dia mivoatra koa ny kalalao.Ny fitaovana famonoana kalalao maro izay noheveriko fa mora ampiasaina dia tsy hahomby amin'ny dingana manaraka.Ity ny...
Mampianatra anao mampiasa florfenicol, mahagaga ny fitsaboana ny aretin-kisoa!
Florfenicol dia antibiotika midadasika, izay misy fiantraikany tsara amin'ny bakteria Gram-positive sy bakteria ratsy.Noho izany, toeram-piompiana kisoa maro no mampiasa matetika florfenicol mba hisorohana na hitsaboana ny kisoa raha misy aretina matetika.marary.Ny mpiasan'ny veterinera amin'ny fiompiana kisoa sasany dia mampiasa super-do...
Fipronil, inona ny bibikely azo tsaboina?
Fipronil dia famonoana bibikely izay mamono indrindra ny bibikely amin'ny alàlan'ny fanapoizinan'ny vavony, ary manana fananana mifandray sy rafitra sasany.Tsy vitan'ny hoe mifehy ny fisian'ny bibikely amin'ny alàlan'ny famafazana ravina, fa azo ampiharina amin'ny tany ihany koa mba hifehezana ny bibikely ambanin'ny tany, ary ny fiantraikan'ny fipron...
Inona avy ireo bibikely afaka misoroka ny pyriproxyfen?
Ny pyriproxyfen madio indrindra dia kristaly.Ny ankamaroan'ny pyriproxyfen vidiana amin'ny fiainana andavanandro dia ranon-javatra.Ny ranon-javatra dia levona amin'ny pyriproxyfen, izay mahasoa kokoa amin'ny fampiasana fambolena.Maro ny olona mahafantatra momba ny pyriproxyfen noho izany.Izy io dia famonoana bibikely tena tsara, misy fiantraikany amin'ny transfo...
Ny Tilmicosin dia saika mitovy amin'ny akora fototra, ahoana no hanavahana ny maha samy hafa azy ireo?
Aretin'ny taovam-pisefoana kisoa hatrizay dia aretina sarotra mamely ny tompon'ny fiompiana kisoa.Ny etiology dia sarotra, ny otrikaretina isan-karazany, ny fihanaky ny aretina, ary ny fisorohana sy ny fanaraha-maso dia sarotra, izay mitondra fatiantoka lehibe ho an'ny fiompiana kisoa.Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny fiompiana kisoa aretina taovam-pisefoana matetika...
Ahoana ny fomba fiasa amin'ny fanaovana tsimparifary glyphosate tanteraka?
Glyphosate no herbicide biocidal be mpampiasa indrindra.Amin'ny tranga maro, noho ny fampandehanana tsy mety ataon'ny mpampiasa, dia hihena be ny fahaizan'ny herbicidal glyphosate, ary ny kalitaon'ny vokatra dia heverina ho tsy mahafa-po.Ny glyphosate dia voafafy amin'ny ravin'ny zavamaniry, ary ny fitsipiny ...
Inona no atao hoe "mofo"?Fiompiana haingana, sarotra sorohana.
An'ny lepidoptera ny samoina tia ahitra, izay niely tany Amerika tany am-boalohany.Ny katsaka, ny vary ary ny voanjo hafa no tena mahatonga azy io.Manafika ny taniko izy io amin'izao fotoana izao, ary misy faritra miparitaka, ary ny kalalao tia ahitra dia tena mahery, ary be ny sakafo.Ary ny ...
Chlorfenapyr dia afaka mamono bibikely maro!
Amin'izao vanim-potoanan'ny taona isan-taona izao, dia misy bibikely marobe mipoitra (kotroky ny tafika, Spodoptera littoralis, Spodoptera litura, Spodoptera frugiperda, sns), ka miteraka fahasimbana goavana amin'ny voly.Ny chlorfenapyr dia manana fiantraikany tsara amin'ny fanaraha-maso ireo bibikely ireo amin'ny maha-zava-dehibe ny famonoana bibikely.1. Toetran'ny c...
Beauveria bassiana dia manana fahafahana lehibe amin'ny fampandrosoana ny tsena eto amin'ny fireneko
Beauveria bassiana dia an'ny fianakaviana Alternaria ary mety ho parasy amin'ny karazana bibikely mihoatra ny 60.Izy io dia iray amin'ireo holatra mpamono bibikely izay ampiasaina betsaka ao an-trano sy any ivelany amin'ny fifehezana biolojika ny bibikely, ary heverina ho entomopathogen miaraka amin'ny fivoarana mahery vaika indrindra ...
Ny anton'ny toetr'andro amin'ny fahombiazan'ny Ethefon
Ny famotsorana ny ethylene avy amin'ny vahaolana ethephon dia tsy mifandray akaiky amin'ny sandan'ny pH ihany, fa mifandray amin'ny toe-piainana ivelany ivelany toy ny mari-pana, ny hazavana, ny hamandoana, sns., Koa aoka ho azo antoka ny mandinika ity olana ity amin'ny fampiasana.(1) Olana amin'ny maripana Ny fahapotehan'ny ethephon incre...
Tena mampiasa abamectin, beta-cypermethrin, ary emamectin tsara ve ianao?
Ny abamectin, beta-cypermethrin, ary emamectin no fanafody famonoana bibikely matetika ampiasaina amin'ny fambolena, saingy azonao ve ny tena toetrany?1, Abamectin Abamectin dia fanafody famonoana bibikely tranainy.Efa 30 taona mahery no nitety tsena.Nahoana no mbola miroborobo ihany izao?1. Fanafody famonoana bibikely...
Ny voly mahatohitra bibikely novolavolaina dia mamono bibikely raha mihinana azy ireo.Hisy fiantraikany amin’ny olona ve izany?
Nahoana no mahatohitra bibikely ny voly mahatohitra bibikely novaina?Izany dia manomboka amin'ny fahitana ny "gène proteinina mahatohitra bibikely".Maherin'ny 100 taona lasa izay, tao amin'ny fikosoham-bary iray tao amin'ny tanàna kelin'i Thuringia, Alemaina, ny mpahay siansa dia nahita bakteria manana asa famonoana bibikely ...
Ny orinasa lehibe dia ahitana ny famonoana bibikely ao an-trano, ny famonoana bibikely, ny biby, ny fanaraha-maso ny lalitra, ny API & mpanelanelana.